သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးမှာ ဝိညာဉ်ရဲ. ဒိန်းခြင်းကို ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် – Myanmar
သူမ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ သူမရဲ. ဦးလေးဖြစ်သူဟာ ဒီအိမ်ကြီးကို သူမတို့မိသားစုဆီ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ ဒီအိမ်ကြီးမှာ နေထိုင်စဉ် ခက်ခဲမှုများစွာ ကြုံရပြီး ငှားရမ်းဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်း ငွေကြေးပြသာနာကြောင့် အဆင်မပြေတာမို့ သူမရဲ. ဖခင်ဆီကို ရောင်းချခဲ့တာပါ ။ သူမတို့မိသားစုဟာ ဒီအိမ်ကြီးကို ပြောင်းလာခဲ့ပြီး မကြာမှီမှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ အရာတွေ စတင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ညစဉ်လိုလိုပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်က လှေခါးအတက်အဆင်း ပြုလုပ်နေသံကို ကြားရပြီး အိမ်ကြီးရဲ. လှေခါးတွေဟာ သစ်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလိုလိုကို သူမတို့မိသားစုက သတိထားမိနေခဲ့တာပါ ။ သူမရဲ. ညီမက အသံကြားတိုင်း အိပ်ယာထက်ကနေထပြီး ဒီအသံဟာ သူခိုးကြောင့်ဖြစ်တာလား ၊ ကြောင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားလို့ သွားပြီး စူးစမ်းတက်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သရဲခြောက်တာဟာ ပိုစိတ်လာပြီး လှေကားမှာတင်မက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ နောက် သူမတို့ရဲ. အိပ်ခန်းနားမှာပါ အသံတွေ တစ်ညထက်တစ်ည ပိုပိုပြီး ကြားလာရပါတယ်။
ညတစ်ညမှာတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူမတို့ရဲ. အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ သူမခံစားရပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ. အိပ်ယာဘေးမှာ ရှိနေတယ်လို့ ခံစားရပြီး အဲ့တုန်းက ဒီဇင်ဘာ ချမ်းအေးတဲ့လတစ်လဖြစ်ပြီး မိုးတွေလည်း ရွာနေခဲ့တာမို့ သူမဟာ မျက်နှာကို စောင်ခြုံထားပြီး စောင်ကိုဖွင့်လို့ အပြင်ကို မကြည့်ရဲလောက်အောင်ပါပဲ ။ မျက်လုံးကို မှိတ်ထားပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရပြီး ကြောက်စိတ်နဲ့အတူ အိပ်ပျော်ဖို့ အတင်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနောက်မှာတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ယာနားကို ပိုပြီးနီးကပ်လာပြီး သူမနားမှာ လှည့်ပတ်နေပေမယ့် သူမကတော့ လုံးဝလှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒီနောက်မှာတော့ သူမဟာ သူမနားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ကြောက်ရွံဖွယ် အသံကို ကြားရပြီး ဒီအသံဟာ တစ်စုံတစ်ယောက် ငိုနေတာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဆိုးနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
နောက်ညမှာလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူမအခန်းထဲ မနက် ၂ နာရီလောက်မှာ ဝင်လာပြီး ရေပန်းဖွင့်သံကြားရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အခန်းထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေခဲ့ပြီး သူမကို ကြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ‘Get out of my room, leave my house otherwise I will ruin you’ လို့ ပြောတဲ့ အသံကိုလည်း ကြားရပြီး ၊ ဒီစကားလုံးတွေဟာ သူမရဲ. ဦးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်နေသလိုပါပဲ ။
နောက်ရက်မှာတော့ သူမဟာ ဖခင်နဲ့ ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၊ နောက်နှစ်ရက်မှာတော့ ဒီအိမ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတော့တယ်။
Supermarketရဲ့ နံရံနဲ့အအေးခန်းသေတ္တာကြားထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားကို 10နှစ်ကြာမှတွေ့ရှိခဲ့